Cabdi Wali oo Jawaari Kabaryay inuu Bad Baadiyo baajiyana mooshinka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cabdi Wali oo Jawaari Kabaryay inuu Bad Baadiyo baajiyana mooshinka
Warka laga helaayo Villa Somalia, ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha dalka Cabdi Weli Sheekh Axmed uu billaabay olole uu ku baajinayo mooshinka ay soo gudbiyeen tageerayaasha Xasan Sheekh Maxamuud.
Warar laga helay ilo ku sugan Madaxtooyada, ayaa sheegaya in Habeennimadii xalay uu kulan aan caadi aheyn dhexmaray Ra’iisul wasaare Cabdi Weli iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari, kaasi oo ay uga hadlaayen Mooshinkii shalay laga gudbiyay Ra’iisul wasaare Cabdi Weli.
Xogtu waxa ay tibaaxeysaa in Ra’iisul wasaare Cabdi Weli uu ka codsaday Jawaari inuu hakiyo Mooshinada laga keenaayo, waxa uuna si gaar ah uga codsaday inuu kala shaqeeyo sidii uu uga adkaan lahaan Xassan Sheekh.
Jawaari, ayaa sida la sheegay waxa uu ka meer-meeray ka jawaabida Codsiga Ra’iisul wasaare Cabdi Weli, balse waxa uu u ballan qaaday inuu xal u heli doono khilaafka.
Ra’iisul wasaare Cabdi Welia yaa dadaal adag ku bixinaayo kasbashada Jawaari iyo Xildhibaanada BF Somalia, isagoona ka faa’iideysanaaya maqnaanshaha Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh.
Dhanka kale, Ra’iisul wasaare Cabdi Weli ayaa bilaabay inuu lacag siiyo Wasiiro iyo Wasiiro ku-xigeeno u qaabilsan taageero uga helidda baarlamanka, isagoona dhaqaale adag xiligaani ku bixinaaya helida Cod aqlabiyad ah oo sahli kara inuu baajiyo.